Iimilo-mveliso kunye nabathengisi - China Semi-Blackout MagicalTex Factory
China Ihowuliseyili Ipholiyesta Semi Blackout Ilaphu
Ingubo yeMagicalTex Roller Blind yenziwe nge-polyester enamandla amakhulu. Kukucima okuphakathi okungakhusela ubumfihlo bakho ngcono. Ilaphu lethu linenqanaba lekhefu eliphantsi, elinokuqinisekisa ukuba akukho siphene kwilaphu. Ukujija isilivere efakwe umthunzi opheleleyo kwilaphu lesilivere-camera, manzi kunye nobungqina beoyile kwaye kulula ukuyicoca. Sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Yinto efanelekileyo kakhulu esikolweni, ekhaya naseofisini.
Singumenzi wobuchwephesha kwiimfama ngaphezulu kweminyaka eyi-16. Injongo yethu kukuthenga ngokulula okukodwa kubathengi bethu. Sijonge ukubonelela kuphela amalaphu afanelekileyo kubathengi bethu. Sine-MOQ encinci, nokuba ubuninzi bakho bukhulu okanye buncinci, sinokusebenzisana nawe. Sinokunikezela ngeesampuli zasimahla kuwe ngentsebenziswano yokuqala.
Amakhethini oMgangatho oMfiliba oMnyama oMnyama
I-MagicalTex yeeMoto eziValiweyo zefestile eziValiweyo ezenziwe ngelaphu zenziwe nge-polyester esemgangathweni. Imveliso egqityiweyo yenye yezona zinto ziphambili. Sinemibala eyahlukeneyo kunye nobubanzi obahlukeneyo kukhetho lwakho. Into nganye inenkangeleko entle kunye nomgangatho olungileyo. Kwaye inesakhono esihle sokufota kwaye inefuthe elifanelekileyo lokungenisa umoya, elungele ukusetyenziswa ekhaya naseofisini.
Amalaphu amakhethini amnyama amnyama aMnyama aMhlophe
I-MgicalTex Roller Blinds Fabric yenziwe nge-polyester esemgangathweni. Umtya we-polyester yi-100% entsha, kwaye konke kungeniswe kwi-Honeywell, okwenza ukuba ibe nomgangatho ophezulu. Sinemibala eyahlukeneyo kunye nobubanzi obahlukeneyo kukhetho lwakho. Into nganye inembonakalo entle kunye nomgangatho olungileyo. Ifanelekile iFrench Window. Unokuba neendlela ezahlukeneyo zokufaka, ezinje ngokuFakwa kweSiling, ukufakelwa kwangaphandle, ukufakwa ecaleni kunye nokunye.
Iimveliso zethu zijolise ekwenzeni ubomi bakho bube ngcono. Iimveliso zethu ukuxhathisa uxinzelelo kunye nobomi benkonzo ende, ngokubhekisele ekusebenzeni kuyabukeka kakhulu, ukusebenza kwe-shading kukwalungile kakhulu, ipateni ijongeka intle kakhulu, ilula kwaye inesitayile. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, kwaye ukuba iodolo yakho incinci, ungakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu. Ngexabiso elifikelelekayo, iimveliso zethu zithandwa phakathi kwabathengi bethu. Singabonelela ngeesampulu zasimahla!
Uyilo oluCwangcisiweyo lweSolum-Blackout Roller Blind Fabric
Ingubo yeMagicalTex Roller Blind ayinamanzi kunye nokuthintela umlilo kumgangatho olungileyo. Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile. Kwaye inesakhono esihle ekufiphiseni kwaye inefuthe lokungenisa umoya. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu. Sinemibala eyahlukeneyo yokhetho lwakho, unokukhetha nayiphi na.
IMagicalTex Roller Blind Fabric ijolise ekwenzeni ubomi bakho bube ngcono. Iimveliso zethu ukuxhathisa uxinzelelo kunye nobomi benkonzo ende, ngokubhekisele ekusebenzeni ngobuchule kakhulu, ukusebenza kwe-shading kukwalungile kakhulu, ipateni ijongeka intle kakhulu, ilula kwaye inesitayile, kulula ukuyifaka. Ngexabiso elifikelelekayo, iimveliso zethu zithandwa phakathi kwabathengi bethu. Kwaye singenza ishishini elicwangcisiweyo. Ukusebenzisana kokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe!
Iwindow eyenziweyo eyimfama eyimfama eyolukiweyo eyiLemi yeBlackout
Ingubo yeMagicalTex Roller Blind ilaphu yenziwe nge-polyester. Kukumnyama okuSemi okungakhusela ubumfihlo bakho ngcono. Sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Yinto efanelekileyo kakhulu esikolweni, ekhaya naseofisini. Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile. Kwaye inesakhono esihle ekufiphiseni kwaye inefuthe lokungenisa umoya.
Umsebenzi wethu kukubonelela ngesisombululo esifanelekileyo sekhethini kubaxumi bethu ngokweemfuno zobungakanani bewindows zabathengi. Sinokukunika esona sisombululo sefashoni. Sine-MOQ encinci, sinesitokhwe uninzi lweemveliso zethu, sinokucwangcisa ukuthunyelwa kuwe kungekudala. Sinokubonelela ngesikhokelo sokufakwa kufakelo kubathengi kwihlabathi liphela.
I-MagicalTex Eco-Friendly Roller Fabric Polyester Semi Blackout yenziwe nge-polyester. Kukumnyama okuSemi okungakhusela ubumfihlo bakho ngcono. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu. Sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, unokukhetha nayiphi na. Yinto efanelekileyo kakhulu esikolweni, ekhaya naseofisini.
Ngendlela yokuvelisa phambili, amandla ethu emveliso anokukhuphisana, senza uhlolo lwe-100% kuzo zonke iimveliso zethu. Ixesha lokuvelisa linokufuna iintsuku ezingama-30. Singacwangcisa ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwimeko yokuba sinesitokhwe. Singabathengisi beevenkile, iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kwaye ixabiso liyakhuphisana. Kwaye sine MOQ esezantsi. Ukusebenzisana kokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe.
Ingubo yeMagicalTex Semi Blackout Roller Blind ilaphu yenziwe nge-polyester esemgangathweni olungileyo. Sinemibala eyahlukeneyo yokhetho lwakho, unokukhetha nayiphi na. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu.
Ilaphu leMagicalTex Blackout Roller Blind alinamanzi kunye nokuthintela umlilo kumgangatho olungileyo. Sinemibala eyahlukeneyo yokhetho lwakho, unokukhetha nayiphi na. Kwaye singenza ishishini elicwangcisiweyo. Singumenzi, sithengisa iimpahla kubathengi bethu ngokuthe ngqo, inokukunceda ngokushiya inkcitho ephakathi. Ukusebenzisana kokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe!
Umgangatho oPhezulu weBalcony Blinds Fabric Semi Blackout
Iimveliso zeMagicalTex Roller Blinds Fabric Semi Blackout Series iimveliso zenziwe nge-polyester enomgangatho ophezulu. Sinikezela amalaphu jacquard ngeendlela ezahlukeneyo ukutyabeka. Indlela kabini ukutyabeka ukutyabeka ubuso ungenza amalaphu semi ezimnyama, amagwebu indlela mhlophe ukutyabeka ungenza amalaphu mnyama. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu. Iimveliso zethu zilungele isikolo, iofisi kunye nasekhaya. Wamkele imiyalezo yakho!
Ilaphu lethu luthintelo lomlilo kwaye alunamanzi, linokudlula kwi-NFPA701（i-USA）isatifikethi, kunye nokukhawuleza kombala ukuba iBanga 4.5. Umgangatho ophezulu wezinto eziphambili zepolyester zenza amalaphu ethu athandwe phakathi kwabathengi bethu. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, iya kufuna malunga neentsuku ezingama-30 ukuyivelisa. Ukuba iodolo yakho incinci, donUngakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla zakho ukuba ujonge umgangatho kunye nombala.
Intengiso eshushu yeRoller Blind Fabric Double Face Dip Coati
Ingubo yeMagicalTex Semi Blackout Roller Blind Fabric yenziwe ngeplastikhi enomgangatho ophezulu kunye nabalinganiswa abalungileyo. Ngombala wobuso obunombala obumbeneyo wendlela yokunxiba eyenza ukuba ibe nefuthe elifanelekileyo ekugcineni ukukhanya kunye nokukhuselwa kwabucala. Izinto ezisemgangathweni zepolyester ezinokuyenza ibe yomelele, kungabikho mngundo, kungabikho nundu, kungabikho deformation, akukho mkhondo emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
Uyilo olutsha lwekhethini eyimfama eyimfashini
IMagicalTex yoyilo olutsha lwekhethini eyimfama engenalusizi ilaphu elenziwe ngeplastiki. Ukutyabeka amagwebu amhlophe kwenza ukuba kungabikho kuphela ukuphela kombane, kodwa kukwanokubonakala okuhle. Yamkelwa ngamalaphu anobungane kwindalo esingqongileyo, ayityhefu kwaye ayinambitheki eyenza imeko entle kuwe. Ifanelekile iFrench Window. Sinemibala eyahlukeneyo kunye nobubanzi obahlukeneyo kukhetho lwakho. Kwaye singenza ishishini le-OEM. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka.
IMagicalTex yoyilo oluLuhlaza lweLaphu eliMnyama lelinye leemfama zethu ezizizimumu. Inokugcina indawo ethe cwaka kuwe. Ilungele ukusetyenziswa ekhaya kunye naseofisini.Amalaphu ethu akhusela amanzi kunye nokuthintela umlilo. Sinikezela iwaranti yeminyaka eli-10 nganye yezinto zethu. Kwaye ngentsebenziswano yokuqala, sinokunikela ngeesampuli kuwe.